Typography Primer | Martech Zone
Saturday, May 26, 2007 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Ny fialamboliko lehibe indrindra, rehefa tsy nahazo olana aho, dia ny sary. Nianatra nandritra ny roa taona mihitsy aza aho nandritra ny fampianarana tany amin'ny lisea ary tiako. Mety hanazava ny antony mahatonga ahy matetika hanana lahatsoratra na lahatsoratra amin'ny sary, Illustrator, sary ary lohahevitra famolavolana hafa.
Na dia tsy mahay mamokatra irery na mamorona endrika lehibe aza aho dia mino aho fa manana faniriana ho azy. Miparitaka aho! Ity misy horonan-tsary kely mahafinaritra amin'ny typography… olona maro no tsy mahalala ny asa rehetra miditra amin'ny famolavolana endri-tsoratra ary ny maha-zava-dehibe ny anjara toeran'ny endritsoratra amin'ny hafatrao.
Fanamarihana iray: Ity dia horonan-tsary tsara iray hanazavana ny fananana fonosana rehetra, saingy tsy dia tiako loatra ireo endritsoratra ampiasainy ao amin'ilay horonan-tsary. Te hizara izany aminao! Amin'izay ianao raha te hanazava amin'ny mpamorona anao fa mila toerana bebe kokoa eo anelanelan'ny litera ianao dia afaka miteny ny fitenin'izy ireo ary miteny hoe: “Azontsika atao ve ny manandrana mampitombo ny kerning?”
Ny verbiage sasany an'ny toetran'ny Typography:
Halavan'ny tsipika - firy ny endri-tsoratra mifanaraka amin'ny tsipika alohan'ny hiverenanao amin'ny voalohany.
mitarika ny - ny elanelana misy eo anelanelan'ny tsipika ny andalana lahatsoratra iray mankamin'ny manaraka.
Kerning - ny elanelana misy eo amin'ny litera amin'ny teny iray.
SAMPA - ny ampahany 'nambolena' ny toetra izay nanoratana ny sisa amin'ny taratasy.
fototra - ny fampifanarahana marindrano amin'ny fototr'ireo litera.
hiakatra - ampahan'ny endritsoratra miakatra mihoatra ny hahavon'ny toetra amam-panahy.
Taranaka - ampahan'ny endritsoratra izay midina ankoatry ny sori-dalana.
Counter - ny toerana fotsy voafefin'ny taratasy.
serif - ny endrika isaky ny fiafaran'ny toetra amam-panahy (sans serif dia midika hoe tsy misy endrika)
x-haavony - ny haavon'ny toetra mampiavaka azy (tsy misy fiakarana na fidinana)
Miala tsiny amin'ireo matihanina any izay manao izany mba hivelomana. Te-hanome primera fotsiny momba ny endritsoratra sy ny typografia amin'ny Marketer antonony aho. Aza misalasala miantso amin'ny alàlan'ny torohevitrao sy ny fanitsiana ahy amin'ny famaritako tsotra.
Hitch sy Marketing
May 27, 2007 ao amin'ny 2: 24 PM
Fampidirana mahafinaritra ho an'ny vao manomboka. Mety hafangaro kely ilay famaritana nataonao tamin'ny "counter". Ny famaritana fohy tsara indrindra henoko dia? Ny toerana fotsy voahidy tarehintsoratra.?
May 27, 2007 ao amin'ny 2: 32 PM
Misaotra Kevin! Nanavao ny famaritana fohy tamin'ny tolo-kevitrao aho.
May 28, 2007 amin'ny 11: 35 AM
Andriamanitra o! Tsy nanana hevitra loatra aho fa nandrafitra endritsoratra. Tena tiako ilay endritsoratra vaovao ampiasain'i Microsoft ao amin'ny Office 2007. Nampiasako azy io nandritra ny fotoana kelikely, ary avy eo niverina tany amin'ny Office 2003 ary tsy tantiko!
11 Jun 2007 amin'ny 12:10 AM
Eny miombon-kevitra amin'i Thore aho, noheveriko fa tsotra izany. Tsy noeritreretiko ho asa loatra izany. Heveriko fa iray monja amin'ireo zavatra raisintsika rehetra tsy misy dikany izany. Misaotra tamin'ny fampahalalana.
Amin'ny manaraka mametraka font aho dia azo antoka fa haka fotoana kely ary hankasitraka ny asa namoronana azy.